Federalism Academy 2020 (Module-1)
Federalism Academy 2020ဖကျဒရယျအကယျဒမီသငျတနျး ၂၀၂၀(Please find... read more →
၇၂ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ပြောကြားသည့် အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်း
Author :ံHenry Van Thio
အဆွေတော်အား (၇၂) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံကြီးရဲ့ သဘာပတိအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရခြင်းအတွက် မိမိအနေနဲ့ ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ အဆွေတော်ရဲ့ ဦးဆောင်နိုင်မှုအောက်မှာ ယခုညီလာခံကြီးဟာ အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင် မယ်လို့ မိမိတို့အနေနဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်။
သဘာပတိကြီးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်များခင်ဗျား -
မိမိအနေနဲ့ ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမပြောကြားမီ မက္ကဆီကို နိုင်ငံမှာ မနေ့က အင်အား ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူများ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အတွက် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့ အစိုးရအား များစွာ ဝမ်းနည်းရပါကြောင်း အခွင့် ကြုံခိုက် ပြောကြားလိုပါတယ်။
အလားတူ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ် ကာလတိုအတွင်းမှာ ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည်သူ များနဲ့ အစိုးရအား များစွာဝမ်းနည်းရပါကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားလိုပါ တယ်။ ယခုအချိန် မှာ မာရီယာ ရီကိန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကို ကြုံတွေ့ ခံစားနေကြရတဲ့ ပွာတိုရီကို ပြည်သူများကိုလည်း များစွာဝမ်းနည်း ရပါကြောင်း ပြောကြား လိုပါတယ်။
ယခုလိုအင်အား ပြင်းထန်လှတဲ့ ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွား နေရခြင်းဟာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြသလျက် ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရာသီ ဥတုပြောင်းလဲမှုဟာ မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကို အမှန်တကယ် အလေးအနက် ခြိမ်းခြောက်မှု ပြုလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ဒဏ်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိနေပြီး သက်ရောက်မှု ပမာဏဟာလည်း မကြုံစဖူးကြီးမားလှပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ဆိုးကျိုးဒဏ်တွေကို ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းများ၊ ရေကြီးမှုများ၊ မိုးခေါင်မှုများ ဒဏ်ကို မကြာခဏခံစားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ပါရီသဘောတူညီချက်ကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါရီ သဘော တူညီချက်မှာ အတည်ပြုပါဝင်ကြောင်း စာချွန်လွှာနဲ့ ကျိုတိုနောက်ဆက် တွဲ စာချုပ်ရဲ့ ဒိုဟာပြင်ဆင်ချက်အား လက်ခံကြောင်း စာချွန်လွှာတွေကို မနေ့ကပဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကို ယခုညီလာခံကြီးမှာ ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ “ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ရှိ လူသား များအားလုံး အတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ သင့်လျော်တဲ့လူနေမှုဘဝ ရရှိရေး -ပြည်သူများကိုအလေးပေး” ဆိုတဲ့ ယခုနှစ် ညီလာခံ ဆောင်ပုဒ်ကို ကြိုဆိုပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အဆုံးသတ်သွားစေဖို့နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အဖြေ ရှာဖွေ သွားနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရရဲ့ မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေတွေကို ချပြခဲ့ ပါတယ်။
ယခုတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖော်ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တိုးတက် အောင်မြင်မှုများနဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်များ အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေများဟာ ကမ္ဘာကြီးက အထူး အာရုံစိုက်လျက်ရှိနေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့ အားလျော်စွာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီကိစ္စရပ်အပေါ်မှာ ဦးစွာ ဆွေးနွေးပြောကြားလိုပါတယ်။
မနေ့ကပဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ နိုင်ငံတွင်းမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် မြန်မာ အစိုးရ ရဲ့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို နိုင်ငံခြားသံတမန် များအား ဖိတ်ခေါ်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလိုပြောကြားခဲ့ရာမှာ အစိုးရ သက်တမ်း ၁၈ လ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရရှိခဲ့တဲ့ စွမ်းဆောင် အောင်မြင်မှုများနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဆဲ အခက်အခဲများကိုလည်း မီးမောင်းထိုးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာသေးမီက အကြမ်းဖက် သမားများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် လူမှုအသိုက် အဝန်းအားလုံးမှ ပြည်သူများ နေရပ်ပြောင်းရွှေ့တိမ်းရှောင်ခဲ့ရမှုများနဲ့ ဒုက္ခခံစားခဲ့ကြရမှုများအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းနည်းတူ မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မျှဝေခံစားရပါကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က “မိမိတို့အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှနဲ့ ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှကို ရှုတ်ချကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်း သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ စစ်ဥပဒေ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များကို တိကျစွာ လိုက်နာကြရန်၊ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ မထိခိုက်စေရေးနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေး အပြည့်အဝ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန် ညွှန်ကြားထား ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ သဟဇာတ မျှတမှုရှိရေးတို့အပေါ် ထိခိုက်စေမယ့်လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို တင်းကျပ်တဲ့ ဥပဒေစံနှုန်းများနဲ့ အညီ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်သူများအတွက် များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စဟာ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံ့တာဝန်များကို စတင် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး အစိုးရရဲ့ ထိပ်တန်းဦးစားပေး ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ တည်ငြိမ်မှု ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ ဒေသတွင်း နေထိုင်ကြတဲ့ လူမှုအသိုက်အ ဝန်းများအကြား သဟဇာတမျှတမှု မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရဟာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေ ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေး အကောင် အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ဗဟို ကော်မတီကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ လူမှုရေးအရ သဟဇာတရှိမှု ရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေချိန်နဲ့ တစ်ဆက်တည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေဖို့အတွက် မိမိတို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ လွယ်ကူတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ မဟုတ်ပါ။ ဒေသတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ အသိုက်အဝန်းများအကြား နားလည် ယုံကြည်မှု၊ သဟဇာတရှိမှုတွေ ပြန်လည်ရရှိလာစေမယ့် ပတ်ဝန်း ကျင်တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ အပြန်အလှန် မယုံကြည်မှုတွေ တဖြည်းဖြည်း ပပျောက်သွားအောင် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ညီလာခံကြီးဟာ အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သုံးသပ်ချက် များကို အကောင်အထည် ဖော်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ပြောကြားဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်မယ်လို့ မူလကမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA လို့ခေါ် တဲ့ အကြမ်းဖက်အုပ်စု ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက်ရှိအခြေ အနေတွေကိုသာ အလေးထားပြောကြားရမယ့်အနေအထား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အဆွေတော် သိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်ရဲ့ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထွက်ရှိလာပြီး နာရီပိုင်း အတွင်းမှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ရဲကင်း စခန်းပေါင်း (၃၀) ကို တစ်ပြိုင်တည်း အကွက်ကျကျ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ARSA အဖွဲ့က ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဒေသတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အသစ်တဖန် ဖြစ်ပွားစေပြီး၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှုအချို့၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေနဲ့ ဒေသတွင်းရှိ အသိုက်အဝန်း အားလုံး အစုလိုက်အပြုံ လိုက် နေရပ်စွန့်ခွာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။
ယခုလို မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေဟာ မွတ်ဆလင် များနဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ သာမကပဲ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ သက်၊ မရမာကြီးနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ ရှိနေတာရယ်၊ သူတို့လည်း ထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြရတယ် ဆိုတာတွေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များများဟာ မသိရှိကြပါ ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် လွန်စွာ စိုးရိမ်လျက်ရှိ တယ် ဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ သိစေလိုပါတယ်။ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ရဲနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်နဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် များစွာ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဒါဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ပြဿနာ တစ်ရပ်ဆိုတာ အငြင်းပွားစရာ မရှိပါဘူး။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ မူဆလင်အများအပြားဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဘက်ကို ဆက်လက် ထွက်ပြေးနေကြဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အပေါ်မှာတော့ စိုးရိမ်မှုဖြစ်ပေါ်မိ ပါတယ်။ အခုလို လူအများအပြား ရွှေ့ပြောင်းတိမ်းရှောင်ကြရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို မိမိတို့ ရှာဖွေကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူသိနည်းတဲ့အချက်ကတော့ မူဆလင် အများအပြားဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ နေအိမ်များမှာ ဆက်လက်နေထိုင်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ ပေးအပ်ဖို့ လိုတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း မိမိတို့အနေနဲ့ သဘောထား ထပ်တူထပ်မျှ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ပဏာမလုပ်ငန်းတာဝန် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေဟာ ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများဟာလည်း ကြီးမားလှပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းနိုင်ဖို့ ဘက်စုံအမျိုးသား မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ကို ချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးအပ်ရေး ဟာ မိမိတို့ရဲ့ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီ လိုအပ်နေကြတဲ့ ပြည်သူများ အားလုံး ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု မရှိဘဲ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများအား လက်ခံ ရရှိစေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာစွာ ချမှတ်ထားပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် နိုင်ငံတော်က ရန်ပုံငွေနဲ့ အရင်းအမြစ် အများအပြားကို ခွဲဝေချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ ဦးဆောင်တဲ့ အကူအညီပေးရေး ယန္တရားသစ် တစ်ရပ်ကို ကြက်ခြေနီ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ထူထောင်ထားပြီး၊ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ ပေးအပ် ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးလို ပါတယ်။
ယခု အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုး ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ နိုင်ငံများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကိုယ်စား ပြောကြားလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ထံမှ မကြာမီက ကူညီထောက်ပံ့ရန် ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ ဆက် ဆံရေး တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလနဲ့ ဇူလိုင်လအတွင်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို အသီးသီးသွားရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို သြဂုတ်လအတွင်းက လာရောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ၎င်းတို့ဝန်ကြီးဘက်က အဆင်မပြေ မှုကြောင့် ခရီးစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဝန်ကြီးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်လာရောက်ရေးကို လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ရှိပြီး နယ်စပ်လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ မိမိတို့ မျှော်လင့်လျက် ရှိပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို မကြာမီက ပြောင်းရွှေ့ သွားကြတဲ့ သူတွေကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ ပြောကြားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စတင်သွားဖို့ ပြင်ဆင် ထားရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မနေ့ကမိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့အိမ်နီးချင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြန်လည် လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းပြီး လက်ခံခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတွေကို အခြေပြုပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ချမှတ်ဖော်ဆောင် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ပုံစံနှင့် အသွင်သဏ္ဍာန်ဖြင့် ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှုကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အားလုံးနဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုဟာ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ဆိုးရွားစွာ ခြိမ်းခြောက်မှု များထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ ရှင်းလင်းပြတ်သား ပါတယ်။ မည်သည့် အကြမ်း ဖက်မှုကိုမဆို မိမိတို့အနေနဲ့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင် ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရေရှည်မဟာဗျူဟာ စီမံချက်ချမှတ် ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် များကို အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများက ဟန့်တားနှောင့် ယှက်နိုင်မှု မရှိစေရေး အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်များဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ရှင်းလင်းတဲ့ လမ်းပြမြေပုံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြု ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တ ပတ်ကစတင်ပြီး ၄င်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်း အစီ အစဉ်အချို့ကို မျက်မြင်လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ လေ့လာသူများကိုလည်း ဖိတ်ကြား သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်များဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မိမိတို့ လျှောက်လှမ်းရမယ့် ခရီးရှည်ကြီးမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထိခိုက်နာကျင်စေရတဲ့ သတိပေး ချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဒီစင်မြင့်ထက်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမအကြိမ် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့စဉ်ကအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကတိကဝတ် ဟာ မယိမ်းမယိုင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်လက် တည်ရှိနေတယ် ဆိုတာ ထပ်လောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
အဲဒီကတိကဝတ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဓိကဦးစားပေးအဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ သာတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရှိခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း ဆိုတဲ့မူတွေအပေါ် အခြေခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဖြစ်ပေါ်လာရေးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ မျှော်မှန်း ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခုနှစ် မေလမှာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာမယ့် အဓိက အခြေခံမူများကို ပထမဦးဆုံး ဆွေးနွေးချမှတ် သဘောတူနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ မြေယာနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံမူ (၃၇) ချက်ပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုသဘောတူ စာချုပ်ကို အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် များက လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုစစ်မှန်တဲ့ တိုးတက်မှုများ ရရှိလျက် ရှိနေသော်လည်း ကျွန်တော် တို့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းဟာ ရှည်လျားပြီး ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတယ် ဆိုတာကို သိထား ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းမှုဟာ အကဲဆတ်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ယခုလို နိုင်ငံတော်ရဲ့ သမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့အနေအထားကို ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေး၊ သာယာဝပြောရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် မှုတွေကို ဆက်လက်ပြီး ထောက်ခံပေးကြဖို့ကို ပန်ကြားလိုပါတယ်။
မိမိရဲ့ မိန့်ခွန်းကို အဆုံးမသတ်မီ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး ရဲ့ ပဋိညာဉ် စာတမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခြေခံမူများအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ရှိပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းပြီး သဟဇာတရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ခိုင်မာစွာ ကတိကဝတ်ပြုပါကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်အပ် ပါတယ်။
Copyright ©2020 Centre for Development and Ethnic Studies. All Rights Reserved. | Design and Developed By CDES & Pro-X.